3D Stone Stone-Wall & Art - Morningstar Stone Co., Ltd.
White Sivec Exotic qaabka ah 3D darbiga la xardhay
Tallaabadani waa mid aasaasi ah oo muhiim u ah dhammaan tallaabooyinka la raacayo. Baloogyada dhagaxa ah ee dhagaxa ah iyo dhagxaanta si ballaadhan ayaa loogu faafiyey alaab ceeriin ah oo diyaar u ah ka shaqaynta Xulashada agabku waxay u baahan tahay aqoon nidaamsan oo ku saabsan astaamaha walxaha iyo dalab iyo maskax diyaar u ah barashada qalab kasta oo cusub. Baadhitaan faahfaahsan oo ku saabsan alaabta ceeriin ah waxay ku lug leedahay: duubista cabbirka iyo hubinta muuqaalka muuqaalka. Kaliya nidaamka xulashada ayaa si sax ah loo qabtay, badeecada ugu dambeysa waxay soo bandhigi kartaa bilicdeeda iyo qiimaha dalabka. Kooxdayada wax soo iibinta, oo raacaya dhaqanka shirkada soo saarida oo kaliya alaab tayo leh, ayaa aad ugu xeel dheer raadinta iyo soo iibsashada alaab tayo sare leh.
CNC Xardho ▼
Farsamaynta warshadaha dhagaxu ma dhicin waqti dheer. Laakiin waxay si weyn kor ugu qaaday warshadaha. Gaar ahaan mashiinnada CNC, waxay u oggolaanayaan codsiyo hal abuur leh iyo naqshadeynta dhagxaanta dabiiciga ah. Mashiinnada CNC, geeddi-socodka dhagxaanta dhagxaanta ayaa ka sax iyo waxtar badan
Dhammaan alaabooyinka la dhammeeyay waxaa looga baahan yahay inay horay u-ururiyaan ka hor intaanay ka bixin dhirta wax-soo-saarka, laga soo bilaabo alwaaxyada ugu fudud ee la jar-jaro illaa qaababka xardhan ee CNC iyo qaababka biyaha-jet. Nidaamkan waxaa badanaa lagu sheegaa inuu yahay mid qalalan. Qalabayn qallalan oo habboon ayaa lagu sameeyaa meel bannaan oo bannaan oo leh maro jilicsan oo jilicsan oo dabaqa ah iyo xaalad iftiin wanaagsan. Shaqaalaheenu waxay dhigi doonaan alwaaxda wax soo saarka dhamaadka dabaqyada sida ku xusan dukaanka, taas oo aan ku hubin karno:
1) haddii midabku iswaafajinayo sida aag ama boos;
2) haddii marmarka loo isticmaalo hal aag ay isku qaab yihiin, dhagax leh xididdo, tani waxay naga caawin doontaa inaan hubino haddii jihada xididka la ballansan yahay ama ay socoto;
3) haddii ay jiraan wax goos goos ah iyo googo goos goos ah oo wax laga beddelayo ama la beddelayo;
4) haddii ay jiraan wax googo ah oo cilado leh: godad, dhibco madow oo waaweyn, buuxinno hurdi ah oo u baahan in la beddelo. Ka dib marka dhammaan baareyaasha la hubiyo oo la calaamadeeyo. Waxaan bilaabi doonaa nidaamka xirxirashada
Waxaan leenahay qayb gaar ah oo wax lagu rakibo. Iyada oo leh keyd joogto ah oo alwaax iyo loox ah ku leh warshadeenna, waxaan awood u leenahay in aan astaysto xirxirida nooc kasta oo alaab ah, midkoodna heer ama mid aan caadi ahayn. Xirfadlayaal xirfadlayaal ah ayaa xirxiraya xirmooyinka alaab kasta iyagoo tixgelinaya: culeyska xaddidan ee xirmo kasta; inuu noqdo taraatigga ka hortagga, shilka kahortagga & shoogga, biyuhu ma galaan. Xirxirid aamin ah oo xirfadle ah ayaa dammaanad ka qaadaysa in si ammaan ah loogu wareejiyo macaamiisha sheyga la dhammeeyay